ခနခန ငလျင်တွေလှုပ်နေတာ ငလျင်ကြီးကြီး ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းရင်းလား?
22 Apr 2018 . 3:14 PM
ခုလတ်တလော မကြာခဏ ဆိုသလို မနက်အစောပိုင်းတွေမှာ၊ နေ့လည်နေ့ခင်းတွေနဲ့ ညအချိန်တွေမှာ သိသိသာသာငလျင်လှုပ်တာမျိုး ကြုံနေကြမှာပါ။ လှုပ်ခါမှုအားပါတဲ့အပြင်၊ စက္ကန့်တော်တော်များများကြာလို့ လူတိုင်းနီးပါး သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါ့အပြင် လှုပ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားကလည်း ရက်ဆက်လာတဲ့အပြင် ငလျင်စိပ်လာတာမျိုးမို့ နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ? ငလျင်ပြတ်ရွေ့ကြောအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ? ငလျင်ကြီးကြီးမားမား ဒါမှမဟုတ် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြီးကြီးကြုံလာရဦးမှာလားဆိုတာတော့ တွေးပူစရာပါပဲ။
ဒီလို ဆက်တိုက်ငလျင်သေးတွေ ခနခနလှုပ်နေရတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေကို နိုင်ငံတကာက တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေက ဒီလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။ ငလျင်သေးလေးတွေ ဆက်တိုက် လှုပ်လာရခြင်းဟာ ငလျင်ကြီးကြီးမားမားရဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ငလျင်ကြောအခြေအနေအရ လနဲ့နှစ်နဲ့ချီကြာမှလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပူစရာမလိုတာက ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ မြေလွှာအောက်က ပြတ်ရွေ့လှိုင်းတွေရဲ့ ဖိအားနဲ့ တင်းအားတွေကြောင့် ဖြစ်လာတာမို့ ဒီလိုငလျင်သေးသေးလေးတွေဆက်တိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဖိအားနဲ့ ပွတ်တိုက်အားတွေ ဖြေလျော့သလိုဖြစ်ပြီး ငလျင်ကြီးဖြစ်ဖို့ အလားအလာတွေ လျော့နည်းသွားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ငလျင်သေးသေးလေးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတည်းက မြေအောက်ပွတ်တိုက်အားတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ တင်းအား၊ ဖိအားတွေထက်ကျော်လွန်လို့ ဖြစ်ရတာမို့ အဲ့လိုလှုပ်ပြီးသွားတဲ့ အချိန် အကုန်လုံးပြန်လည်အစပြုပြီး ငလျင်ကြီးတစ်ခုကို အစပျိုးဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
အဲ့လို ငလျင်ကြီးမဖြစ်ခင် ရှေ့ပြေးလှုပ်တဲ့ငလျင်တွေကိုတော့ Foreshocks လို့ခေါ်ပြီး ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲ ငလျင်သေးသေးလေးတွေကို Aftershocks လို့သုံးနှုန်းပါတယ်။
ငလျင်ဗေဒပညာရှင်တွေဟာလည်း ငလျင်လှိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စောင့်ကြည့်ခြေရာခံနေပြီး အဲ့လို Foreshocks တွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာပြီးတာနဲ့ Magnitude နဲ့ Frequency တွေကို တိုင်ထွာချိန်ဆပြီး ငလျင်ပြင်းအားကြီးကြီးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို တွက်ချက်စစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။
Foreshocks တွေများလွန်းတာဟာ ငလျင်ကြီးဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားနဲ့ မသက်ဆိုင်နေပေမယ့်လည်း မဖြစ်ခင်အခြေအနေကထက် ငလျင်သဘာဝအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ခနခန ငလငျြတှလှေုပျနတော ငလငျြကွီးကွီး ဖွဈလာဖို့အကွောငျးရငျးလား?
ခုလတျတလော မကွာခဏ ဆိုသလို မနကျအစောပိုငျးတှမှော၊ နလေ့ညျနခေ့ငျးတှနေဲ့ ညအခြိနျတှမှော သိသိသာသာငလငျြလှုပျတာမြိုး ကွုံနကွေမှာပါ။ လှုပျခါမှုအားပါတဲ့အပွငျ၊ စက်ကနျ့တျောတျောမြားမြားကွာလို့ လူတိုငျးနီးပါး သတိထားမိကွမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ လှုပျတဲ့ကာလအပိုငျးခွားကလညျး ရကျဆကျလာတဲ့အပွငျ ငလငျြစိပျလာတာမြိုးမို့ နောကျဆကျတှဲ ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာနိုငျမလဲ? ငလငျြပွတျရှကွေ့ောအခွအေနေ ဘယျလိုလဲ? ငလငျြကွီးကွီးမားမား ဒါမှမဟုတျ သဘာဝဘေးဒဏျကွီးကွီးကွုံလာရဦးမှာလားဆိုတာတော့ တှေးပူစရာပါပဲ။
ဒီလို ဆကျတိုကျငလငျြသေးတှေ ခနခနလှုပျနရေတဲ့ နောကျကှယျက အကွောငျးရငျးတှကေို နိုငျငံတကာက တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ ပညာရှငျတှကေ ဒီလိုသုံးသပျထားပါတယျ။ ငလငျြသေးလေးတှေ ဆကျတိုကျ လှုပျလာရခွငျးဟာ ငလငျြကွီးကွီးမားမားရဲ့ ရှပွေ့ေးနိမိတျလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပမေယျ့ ငလငျြကွောအခွအေနအေရ လနဲ့နှဈနဲ့ခြီကွာမှလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျပူစရာမလိုတာက ငလငျြလှုပျတယျဆိုတာ ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ မွလှောအောကျက ပွတျရှလှေို့ငျးတှရေဲ့ ဖိအားနဲ့ တငျးအားတှကွေောငျ့ ဖွဈလာတာမို့ ဒီလိုငလငျြသေးသေးလေးတှဆေကျတိုကျလှုပျလိုကျတဲ့အတှကျ ဖိအားနဲ့ ပှတျတိုကျအားတှေ ဖွလြေော့သလိုဖွဈပွီး ငလငျြကွီးဖွဈဖို့ အလားအလာတှေ လြော့နညျးသှားပါတယျ။
တဈဖကျမှာလညျး ငလငျြသေးသေးလေးတှဖွေဈပျေါတယျဆိုတညျးက မွအေောကျပှတျတိုကျအားတှဟော လိုအပျတဲ့ တငျးအား၊ ဖိအားတှထေကျကြျောလှနျလို့ ဖွဈရတာမို့ အဲ့လိုလှုပျပွီးသှားတဲ့ အခြိနျ အကုနျလုံးပွနျလညျအစပွုပွီး ငလငျြကွီးတဈခုကို အစပြိုးဖို့ ဖွဈနိုငျတယျလို့လညျး သုံးသပျထားကွပါတယျ။
အဲ့လို ငလငျြကွီးမဖွဈခငျ ရှပွေ့ေးလှုပျတဲ့ငလငျြတှကေိုတော့ Foreshocks လို့ချေါပွီး ငလငျြလှုပျပွီးနောကျဆကျတှဲ ငလငျြသေးသေးလေးတှကေို Aftershocks လို့သုံးနှုနျးပါတယျ။
ငလငျြဗဒေပညာရှငျတှဟောလညျး ငလငျြလှိုငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့အခကျြအလကျတှကေို စောငျ့ကွညျ့ခွရောခံနပွေီး အဲ့လို Foreshocks တှဆေကျတိုကျဖွဈလာပွီးတာနဲ့ Magnitude နဲ့ Frequency တှကေို တိုငျထှာခြိနျဆပွီး ငလငျြပွငျးအားကွီးကွီးဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျကို တှကျခကျြစဈဆေးဖို့ကွိုးစားနကွေပါပွီ။
Foreshocks တှမြေားလှနျးတာဟာ ငလငျြကွီးဖွဈဖို့အကွောငျးတရားနဲ့ မသကျဆိုငျနပေမေယျ့လညျး မဖွဈခငျအခွအေနကေထကျ ငလငျြသဘာဝအန်တရာယျကာကှယျရေးတှအေတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားနိုငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။